Global Voices teny Malagasy » Misaona an’i Lazarova, Mpihira Nentin-drazana, Izay Nanome Aingam-panahy Ho An’ny Mpikatroka ny Nanjò Azy, ny Makedoniana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Marsa 2017 4:32 GMT 1	 · Mpanoratra Filip Stojanovski Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Makedonia, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Sarimihetsika, Vaovao Mafana, Zavakanto & Kolontsaina, Zon'olombelona
Mpanao gazety Ognen Janeski miantsafa an'i Vanja Lazarova (eo ankavanana) tamin'ny taona 2014. Pikantsary avy amin'ny fampahalalam-baovaon'ny TV 24.
Namoy ny ainy tamin'ny Alahady 12 Marsa tao Skopje teo amin'ny faha-86 taonany i Vanja Lazarova, mpanao hiram-bahoaka Makedoniana.
Nanana asa miavaka i Lazarova, saingy manoloana ny fiafaran'ny fiainany, tafalatsaka tao anatin'ny haizina sy niaina tanaty fahantrana izy – ka nanjary nifantohan'ny hetsika antserasera izay nanampy azy hahatratra ny satan'ny Mpanakanton'ny Firenena. Tsy vitany hoe nanampy an'i Lazarova ihany ny hetsika fa naneho fandresena lehibe ho an'ny olom-pirenena Makedoniana manoloana ny fanjakana tsy mahazaka tsikera.
Teraka tamin'ny taona 1930 tao an-tanànan'i Stracin i Lazarova ary niasa tamin'ny Opera tao amin'ny Teatiram-pirenena Makedoniana sy ny Hirambahoaka Nasionaly Ensemble Tanec . Nanao fampisehoana teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy, anisan'izany ny filalaovana ny Royal Albert Hall tao Londra natolotra ho an'ny mpanjakavavy Elizabeth II sy ny praiminisitra Winston Churchill. Izy no mpihira Makedoniana voalohany nandrakitra feo ho an'ny marika malaza tahaka ny Polygram sy ny Philips.
Veloma farany ho an'i Vanja Lazarova tsy manam-paharoa. Nihira ny lahatra ho antsika tamin'ny fofon'aina tokana izy
Ho tsaroana amin'ny fihiràny ny hira tahaka ny “I was Born in Hardship (Teraka tao anatin'ny Sarotra aho)” izy (ny lahatsary nivoaka tamin'ny taona 1980 eo ambany dia avy amin'ny tahirin'ny Haino Aman-jerim-panjakana Makedoniana).
Nanampy tamin'ny feon-kira mahomby indrindra tamin'ny sarimihetsika Makedoniana, “Before the Rain ,”(Talohan'ny ranonorana) miaraka amin'ny tarika Anastasia  izy. Nahazo ny loka Liona Volamena tamin'ny Fetiben'ny Filma Venizy tamin'ny taona 1994 ny sarimihetsika ary voatendry tamin'ny Loka Academy ho an'ny Filma amin'ny Teny Vahiny Tsara indrindra. Nilaza ny tale, Milcho Manchevski fa iray amin'ireo singa manan-danja ny mozika ao amin'ny sarimihetsika.
Nandritra ny vanim-potoana farany niainany, Nonina tamin'ny trano fitaizana beantitra tsy miankina tamin'ny vola fisotroan-dronono kely isam-bolana latsaky ny 170 dolara i Lazarova. Tsy mba nandray tombontsoa tamin'ny fampiasàna (zon'ny mpamorona) ny hirany izy, ary ny tompon'ny trano fitaizana beantitra no niantoka ny fandaniany.
Nahita ny nanjò an'i Lazarova ilay mpanao gazety Ognen Janeski  tamin'ny May 2014. Tsy dia nahasarika ny tatitra nalefan'ny fahitalavitra tsy miankina TV 24 tany am-boalohany, saingy raha namoaka izany tao amin'ny aterineto i Janeski tamin'ny 13 May, dia niteraka fahatafintohinana tao amin'ny Facebook izany.
Nandritra ny alina, olona maherin'ny 8.000 no nanatevin-daharana ny pejy Facebook “Fanohanana an'i Vanja Lazarova. ” Amin'ny maha mpitia izany pejy izany, nanohana ny fangatahan'ny pejy ihany koa ireo olona fa tokony “handray ny satan'ny Mpanakantom-pirenena sy ny fisotroan-drononom-pirenena i Lazarova.” Maro ihany koa ireo olo-malaza naneho fanohanana imasombahoaka, toy ilay mpiangaly mozika malaza indrindra Origjanski Zlatko izay niara-niasa taminy tamin'ny “Before the Rain.” Tao anatin'ny iray andro latsaka, nahatratra 10.000 ireo nanao sonia ary nitombo avo roa heny tamin'ny fiafaran'ny hetsika.
Nihetsika avy hatrany ireo manam-pahefana afa-baraka, nandefa ny minisitry ny kolotsaina mba hitsidika azy maika ao amin'ny trano fitaizana beantitra. Nandritra ny fitsidihana, nanatontosa valan-dresaka ho an'ny mpanao gazety ny minisitra ary nilaza fa hodinihana indray ny fangatahan'i Lazarova fisotroan-dronono ho an'ny Mpanakantom-pirenena, izay nolavina tany am-boalohany.
Nomen'ny fanjakana Lokan'ny 1 Oktobra avy eo i Lazarova, natolotra nandritra ny fetim-pirenena miavaka fahatsiarovana ny fitroarana manohitra ny Fasisma tamin'ny taona 1941. Ilaina ny loka mba ahafahan'i Lazarova mahafeno ny fepetra hahazo ny sata maha Mpanakantom-pirenena sy hahazo ny fisotroan-dronono miaraka amin'izany.
Androany (13 mey 2016) no tsingeritaona faharoan'ny hetsika ho an'i Vanja Lazarova. Izany no hetsiky ny olom-pirenena nahomby voalohany tao anatin'ny enin-taona. Fitiavana!
Taorian'ny fahombiazan'ny hetsika, raharaha maro hafa no nampiasa pejy Facebook ho fanangonan-tsonina mitovy amin'izany.
Nandany ny roa taona farany niainany tao amin'izany trano fitazaina beantitra izany ihany i Lazarova, mitolona amin'ny olan'ny fahanterany sy ny fahasalamany marefo. Navoaka indray nandritra izany fotoana izany ny sasany tamin'ireo raki-peony, ary nanohana ara-bola ny lahatsary fanadihadiana momba azy  ny fanjakana.
Tadidinao ve ny nanaovana an-jorombala an'i Vanja Lazarova mandra-pahitan'i Ognen Janeski azy ary nanaovany antsafa? Mandria am-piadanana, Vanja.
Mbola manohy manompo ho amin'ny tombontsoam-bahoaka amin'ny maha mpanao gazety sy mpikatroka azy i Ognen Janeski, mpanao gazety. Voalaza fa nahatonga ny fianakaviany ho lasibatry ny valifatin'ny antokon'ny fitondrana ny asany mampiseho ny tsy fahatomombanan'ny rafitra. Nilaza izy fa tsy nety namatsy vola ho an'ny ray aman-dreniny, izay miasa amin'ny andrim-panjakana ara-kolontsaina ao an-tanànan'i Prilep ny Minisiteran'ny Kolontsaina, taorian'ny nandraisany fanapahan-kevitra hanao ny hetsika hanohana an'i Lazarova. Nitatitra ihany koa izy fa niaritra fampidininana grady ihany koa ny anabaviny miasa ao amin'ny Fifandraisandavitra (Telecom) Makedoniana (izay ananan'ny governemanta ampaham-bola), avy hatrany taorian'ny fihetsiketsehana mitaky izay tompon'andraikitra tamin'ny fahafatesan'i Tamara Dimovska, 9 taona, izay maty teo am-piandrasana fitsaboana tamin'ny Febroary 2015. Anisan'ny niara-nikarakara ny fihetsiketsehana i Janeski tamin'izany.
Nanao ho lasibatra an'i Zlatko Origjanski, mpiangaly mozika tamin'ny endrika fanerena isan-karazany ihany koa ny antokon'ny fitondrana rehefa avy niresaka momba an'i Lazarova izy, sy taorian'ireo fotoana maro hafa izay niampangany ampahibemaso ny fanararaotam-pahefana sy ny kolikoly ataon'ny manampahefana.
Vao haingana indrindra, izay tafiditra ao anatin'ny hetsika fandrahonana mandeha amin'izao fotoana izao atao amin'ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena, sy ny mpanao gazety tsy miankina  ary ireo mpitsikera hafa, avy amin'olon-tsy fantatra izay nanimba ny varavarany  tamin'ny peta-taratasy misy lahateny feno fankahalana manevateva tamin'ny 27 Febroary ihany koa ny tranon'i Origjanski, Nitatitra ny fanafihana tany amin'ny polisy izy, saingy tsy nisy fivoarana ny raharaha. Herinandro taty aoriana, tamin'ny 3 marsa, tonga tao am-bavaravarany ny vondron'olona tsy fantatra miaraka amin'ny kamera ary niherisetra taminy, tamin'ny fiantsoana azy ho “mpamadika”. Nanaparitaka ny lahatsary  mba ho porofon'ny “fahatezeram-bahoaka” avy eo ny vavahadim-baovao mpanohana ny fanjakana .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2017/03/16/96812/
 Hirambahoaka Nasionaly Ensemble Tanec: https://en.wikipedia.org/wiki/Tanec
 “Fanohanana an'i Vanja Lazarova.: https://www.facebook.com/vanja.lazarova.official/
 lahatsary fanadihadiana momba azy: http://www.filmfund.gov.mk/Movies/2015/The%20Retirement%20Home%20Diva
 fihetsiketsehana : https://globalvoices.org/2015/02/28/macedonian-girl-dies-awaiting-grand-opening-of-medical-center/
 hetsika fandrahonana mandeha amin'izao fotoana izao : http://meta.mk/en/civil-moi-to-prevent-attacks-on-journalists-activists-and-public-personas/
 fikambanana fiarahamonim-pirenena, sy ny mpanao gazety tsy miankina: https://globalvoices.org/2017/02/25/macedonias-ruling-party-is-draining-civil-society-groups-time-and-money/
 nanimba ny varavarany: http://lokalno.mk/origanski-izlegov-po-tsigari-koga-se-vrativ-vratata-mi-beshe-izlepena-so-navredlivi-nalepnitsi/